Baihetan-Jiangsu ဗို့အားမြင့် ဓါတ်အားလိုင်းစီမံကိန်း တည်ဆောက်ပြီးစီး - Xinhua News Agency
ဝူဟူ၊ မတ် ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
Baihetan-Jiangsu ၈၀၀ ကီလိုဗို့အား ဗို့အားမြင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်သွယ်တန်းရေးစီမံကိန်း UHV စီမံကိန်း ၏ အန်းဟွေးအပိုင်းတွင် နောက်ဆုံး လျှပ်ကူးပစ္စည်း ၆ ခု အား မတ် ၁၄ ရက်တွင် ချထားနိုင်ခဲ့ရာ ယင်းမှာ ယန်ဇီမြစ်အား ဖြတ်သန်းသွယ်တန်းသည့် အန်းဟွေးပြည်နယ်အပိုင်းချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးလိုင်း သွယ်တန်းမှု ပြီးစီးသည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်လာသည်။
စီမံကိန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်ပြည်နယ် ရှိ Baihetan မှ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းဆူးပြည်နယ်အထိ ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ အနောက်ဘက်မှ အရှေ့ဘက်သို့ စွမ်းအင် သွယ်တန်းသည့် စီမံကိန်း၏ အဓိကကျသည့်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ပါက စီမံကိန်းမှ နှစ်စဉ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီပေါင်း ၃၁.၂ ဘီလီယံကျော် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Construction of Baihetan-Jiangsu UHV power transmission project completed
WUHU, March 15 (Xinhua) — The last six conductors were laid out in Anhui section of Baihetan-Jiangsu 800-kilovolt ultra-high-voltage (UHV) direct current power transmission project on March 14, marking the completion of the Anhui section of the power transmission line across the Yangtze River.
The project stretching from Baihetan in southwest China’s Sichuan Province to east China’s Jiangsu Province is an important part of the country’s west-to-east power transmission program. Once operational, the project will deliver more than 31.2 billion kWh of electricity annually.